XASAASI: Real Madrid Oo Mid Kamida Xiddigaha Ugu Mustaqbalka Fiican Barcelona Qaab Bilaash Ah Ku Doonaysa - Laacib
HomeWararka CiyaarahaXASAASI: Real Madrid Oo Mid Kamida Xiddigaha Ugu Mustaqbalka Fiican Barcelona Qaab Bilaash Ah Ku Doonaysa
XASAASI: Real Madrid Oo Mid Kamida Xiddigaha Ugu Mustaqbalka Fiican Barcelona Qaab Bilaash Ah Ku Doonaysa
Sida ay sheegayaan warbixino ka imanaya Catalonia, kooxda Real Madrid ayaa weerar ku ah dhigeeda Barcelona iyada oo ka doonaysa xiddiga mustaqbalka weyn ee Ronald Araujo oo daafaca dhexe ee Barca asaasi ka ah.
Sida uu sheegayo raadiyaha ree Spain ee KNB, Madrid ayaa qorshaynaysa inay heshiis heer sarre ah u bandhigto Araujo oo qandaraaskiisa Barcelona yahay mid dhacaya 2023, waxa xusid mudan inay istaageen wadahadaladii heshiis kordhin ay Barcelona ka doonaysay.
Xiisaha uga imanaya Santiago Bernabeu ayaan ahayn mid ay soo dhawayn doonaan madaxweyne Joan Laporta iyo shaqaalaha kale ee Barcelona ee 23 sano jirka ree Uruguay u arka mid kamida tiirarka daafaca ee uu kooxda ka hareero dhisi doono Xavi Hernandez.
Real Madrid ayaa la xasuustaa inay saxeexa Araujo isku day-day sanadkii 2018 kahor inta uusan isagu go’aansan inuu Barca u wareego, Ramon Planes oo wakhtigaas ahaa agaasimaha ciyaaraha Barcelona ayaa deg-deg uga hawl-galay heshiiska Ronald oo dhammaystiray.
Araujo ayaa Blaugrana kaga yimid dhinaca kooxda Boston River heshiis 1.7 Milyan euro ah oo marka lacagta shuruudaha ku xidhan lagu daro gaadhaya 5.2 Milyan oo euro.
Wakiilka ciyaaryahanka oo lagu magacaabo Flavio Perchman ayaa sheegay inuu kooxda la fadhiisan doono kahor dhammaadka 2021 balse kooxda ayaa u muuqata mid diirada saartay heshiis kordhinta Ousmane Dembele iyo Gavi iyo waliba qorshaheeda suuqa January.